medical Archives - NepalDut NepalDut
अनेरास्ववियु नेताको संगीन आरोप : डा. केसी प्रतिक्रियावादीका मतियार
अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव सुदेश पराजुलीले डा.गोबिन्द केसी कम्युनिष्ट बिरोधी एजेन्ट भएको दाबी गरेका छन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन र कम्युनिष्ट पार्टीलाई बदनाम बनाउन प्रतिक्रियावादीहरुले डा.केसीलाई मतियार बनाएको उनको आरोप छ । आइतबार काकडभिट्ट बहुमुखी क्याम्पस झापाले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रमुख अथितिका रुपमा बोल्दै सचिव पराजुलीले लोकप्रिय नाराको आबरणमा डा.केसीले कम्युनिष्ट बिरुद्ध श्रृखलाबद्ध हमाला गरीरहेको उनको दाबी छ । पछिल्लो परिर्वतन निस्तेज पार्नका लागि डा.केसी प्रयोग भइरहेको उनको… पुरा पढौ
सरकार जनताको कि माफियाको ?
अनसनपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत डा गोविन्द केसीको समर्थनमा पोखरामा उनका मागप्रति प्रदर्शन भएको छ । मानवअधिकार चौतारा चिप्लेढुङामा जम्मा भएर पोखरेलीले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका सहभागीले ‘माफियामुखी ऐन चाहिँदैन’, ‘हिजोको सम्झौता कता गयो ? सरकारको नैतिकता गायब भयो’, ‘सरकार जनताको हो कि माफियाको’ जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए । सोलिडारिटी फर डा केसीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी, युवा तथा नागरिक अगुवाको सहभागिता थियो ।… पुरा पढौ
गोविन्द केसीको अनसनको अर्थ छैन : झाँक्री
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसीले पटक–पटक आमरण अनसन बस्नुको अर्थ नरहेको नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छन् । पर्वतमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै झाँक्रीले केसीको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर भ्रम छर्दा नकारात्मक असर परेको बताइन् ।डाक्टर केसीसँग सरकारले सम्झौता तोडमोड नगरेको बरु केसीका माग आवश्यक नरहेको भन्दै संसादबाट पारित नगरिएकोउनले बताइन् । पटक–पटक सरकारलाई दोष दिन जनता उर्फान केसी र कांग्रेसले भूमिका खेलेको आरोप लगाइन् । सरकारले केसीको स्वास्थ्यलाई… पुरा पढौ
डाक्टर र पत्रकारलाई हातपात गर्ने डन बद्री
सहकर्मी डाक्टरलाई केही दिनअघि हातपात गरेका डा. बद्रि पौडेलले सोमबार साँझ पत्रकारलाई पनि दुव्र्यवहार र हातपात गरेका छन् । पृथ्वीचोकको चरक मेमोरियल अस्पतालमा कार्यरत डा. पौडेलले फेवा टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर हेमराज अधिकारी र क्यामेरा पर्सन समिर सुनारमाथि दुव्र्यवहार र हातपात गरेका हुन् । केही दिनअघि डा. बद्रि लगायतले डा. ऋषिराम ढकाललाई अस्पतालमै हातपात गरेका थिए । सोही विषयमा रोपोर्टिङ गर्न पुगेका अधिकारी र सुनारमाथि डा. पौडेलले अभद्र व्यवहार गरेका हुन्… पुरा पढौ